ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ လွှတ်တော်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (JCC) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် Australian Volunteers Program (AVP) အဖွဲ့၏ အရှေ့အာရှဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးးMr. David Sharman Selvidge အားလက်ခံတွေ့ဆုံ | Pyithu Hluttaw
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်ခေါင်းဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင် များနှင့် အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံ ကိုယ်စား လှယ်များ မျက်နှာစုံညီတွေ့ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက်
ဒုတိယအကွိမျ ပွညျသူ့လှတျတျော (၁၃)ကွိမျမွောကျ ပုံမှနျအစညျးအဝေး ကငျြးပရနျ ချေါယူခွငျး
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယဦးစီးမှူးဝင်ပေါက်ရာထူး ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ လွှတ်တော်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (JCC) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် Australian Volunteers Program (AVP) အဖွဲ့၏ အရှေ့အာရှဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးးMr. David Sharman Selvidge အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
1 November 2018 - 0
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ လွှတ်တော်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (JCC) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် သည် Australian Volunteers Program (AVP) အဖွဲ့၏ အရှေ့အာရှဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး Mr. David Sharman Selvidge အား ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ရုံးခန်း၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် Australian Volunteers Program (AVP) အဖွဲ့အနေဖြင့် မြန်မာလွှတ်တော်များ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် ထိရောက်သော အကူအညီများ ပေးအပ်နိုင်ရေး၊ လွှတ်တော်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့(JCC) နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရေးဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍမြှင့်တင်သွားနိုင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတူ လွှတ်တော်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (JCC) အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသော ဒေါ်အေးအေးမူ၊ ဦးတင်အောင်ချိုနှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးနှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးတို့မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင
မြန်မာလွှတ်တော်နှင့် Hanns Seidel Foundation-HSF တို့အကြား ချုပ်ဆိုသည့် မြန်မာလွှတ်တော်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ သက်တမ်းတိုး(MoU) လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကျင်းပ
မြန်မာလွှတ်တော်နှင့် Hanns Seidel Foundation-HSF တို့အကြား ချုပ်ဆိုသည့် မြန်မာလွှတ်တော်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရ
“စက်မှုဇုန် ဥပဒေကြမ်း” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကြားနာမှု အခမ်းအနားကျင်းပ
“စက်မှုဇုန် ဥပဒေကြမ်း”နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကြားနာမှု အခမ်းအနားကို ယနေ့မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲ အချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ဇမ္ဗူသီရ
လွှတ်တော်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (JCC) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် Westminster Foundation for Democracy (WFD) မှ မြန်မာနိုင်ငံဌာနေကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စောသီရိရူပအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပွညျသူ့လှတျတျောဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ ဦးထှနျးထှနျးဟိနျ၏ ၁၃၈၁ ခုနှဈ မွနျမာနှဈသဈကူး နှုတျခှနျးဆကျစကား
မွနျမာသက်ကရာဇျ ၁၃၈၁ ခုနှဈ နှဈသဈမင်ျဂလာ အခါသမယတှငျ မွနျမာတဈနိုငျငံလုံးရှိ မိဘပွညျသူ ညီအဈကိုမောငျနှမမြား စိတျ၏ ခမျြးသာခွငျး ကိုယျ၏ ကြ